FreeYard: August 2012
यात्रा: अद्रिश्य पर्खालको खोजिमा
खुट्टाहरु गल्न थलिसकेका थिए । सुनसान जंगल, अध्यारिएको आकाश, चराचुरुङी आफ्नै लयमा भाका बुनिरहेका थिए । साथिहरु आफ्नै तालमा हिडिरहेका थिए । मलाई फेरि एकचोटी सोध्न मन लाग्यो अलि निस्चिन्त हुन। थकित स्वरमा मैले उसलाइ सोधिहाले ,"हामी पुग्ने चाँही कहाँ हो नी ?" उस्ले उही पुरानो मुस्कान फिस्स छोड्दै भन्यो -"मैले तिमीलाई अघि नै भनेको होईन ,पर्खाल हेर्न जान थालेको ।"
हो , यति त उसले कलेज मै भनिसकेको थियो । 7th सेमेस्टरको पहिलो दिन ,एकाएक कलेजमै सबैजना भेट भएका थियौ र सदा झै हचुवामा प्लान बनेको थियो ,लामो पर्खाल घुम्न जाने । मैले फेरि सोधे- "कस्तो पर्खाल हो र ? " उस्ले भन्यो "नेपालको सबैभन्दा लामो पर्खाल ।" "ohoo!great wall of nepal " उसको मुस्कानलाई टक्कर दिने प्रयास गर्दै मैले भने ,"तिमी पहिले पनि आएका थियौ ? " "नो" उसले टाउको हल्लायो । "अनी यहाँ छ भन्ने कसरी थाहा पायौ त ?" ऊसले गर्वसाथ उत्तर दियो- "सामान्य ज्ञानको किताब पढेको थिए , त्यसैमा लेखेको थियो ,नेपालको सबैभन्दा लामो पर्खाल शिवपुरी राष्ट्रिय निकुन्जमा छ भनेर । "
उसको यस्तो जवाफ सुन्नासाथ् कताकता भिन्न अनुभुती भयो । पहिलेको भन्दा अलिकति भिन्नै । हुनत हाम्रो घुमघाम गन्तब्यहिन नै हुने गर्थ्यो । बाटो नाप्दै गएपछी , गन्तब्य बन्दै जान्थ्यो । जति जति खुट्टाहरु अघि बढ्दै जान्थे, हाम्रो हाम्रो यात्रा उती जटिल र रोमान्चक बन्दै जान्थ्यो खुट्टा र गफको तालमा । adventurous यात्रा गर्ने बहानामा कैयौपल्ट स-साना बाधा अड्चन पनि नपरेका होइनन । तर यो यात्रा पहिलेको भन्दा अली फरक थियो । फरक कुन अर्थमा म किटेरै भन्न सक्दिन । तैपनि केही फरक भने अवस्य थियो ।
सधैं घुमघाममा हामी केटाहरु मात्र हुन्थ्यौ । तर यो यात्रामा हाम्रा दुई केटी साथिहरु पनि संगै घुम्न आएका थिए । त्यसैले हामि माथी समयको पावन्दी थियो अनी गन्तब्य थियो सामान्य ज्ञानको पानामा अधिपत्य जमाएको नेपालको लामो पर्खाल हेर्ने । जति जति केटाहरुको गफमा weight थपिदै जान्थ्यो , हाम्रो खुट्टाको गति पनि त्यहि अनुसार बढ्दै जान्थ्यो । यस्तै घुमघामबाट हामीले एउटा निश्कर्ष भने निकालिसकेका थियौ -"जसले रोमन्चक गफ हान्न सक्छ उस्को ग्रुप अगाडी हुन्छ। " हुन पनि हो चर्को स्वरमा फिल्मी गफ हान्ने साथी र भाबुकता र पढाइका गफ गर्ने साथिहरुबिच निकै दुरी देखिन्थ्यो हिड्ने क्रममा । कहिले area 51 का कुरा त कहिले क्रीकेट मास्टर सचिनका कुरा । कहीले महाभारत का कुरा त कहीले Dan Brown का Da Vinci Code का कुरा । कसरी अटेका होलान् त्यत्तिका कुराहरु एउटै हरफमा ।
"ओये राजन अली बिस्तारै बोल है " खै राजनको मुखबाट के निस्कियो त्यस्तो अर्कोले साबधान गराइरहेको थियो । साँच्चै केही सतर्क हुनु पर्ने समय जो थियो । non-veg शब्द निकाल्न अली मनाही थियो । पहिले पहिले को घुमघाम्मा त जति जे बोले पनि हुन्थ्यो । शब्दहरु स्वतन्त्रता चाँहदा रहेछन र स्वतन्त्रताले शब्दलाई अश्लिल पनि बनाउदो रहेछ । कति शब्दहरु घाटीमै अड्किन्थे र केही शब्द फिल्टर हुदाहुदै पनि फुत्त बाहिर निस्कन्थे र केटाहरु जिब्रो टोक्दै पछुताए झैँ गर्थे ।
पृष्‍ठभुमीमा चराचुरुङीको संगितमा साथिहरु परेड खेलेझैँ आवाज निकाल्दै अघि बड्दै थिए कुनै बेग्लै संसारको खोजिमा । भर्खरै सकिएको 6th semesterko examले सबैको दिमाग hang गरिसकेको थियो । महिनौ दिनसम्म चलेको examले जबरजस्ती दिमागलाई खेलाउन वाध्य बनाएको थियो । "आफुले जे छाड्ड्यो त्यहि प्रश्न सोध्छ यार ।" "यो सेम त धोबी भयो ।" अर्कोले थप्दै थियो । "कहीले पो राम्रो भाथ्यो र ? " केटाहरु गुनासो पोखिरहेका थिए । संगै घुम्नुको मज्जानै यही थियो सबैको पिडा share गर्न पाइन्थ्यो । ऊता रमेश loudspeaker भन्दा चर्को स्वोरमा चिच्याइरहेको थियो -" लास्टको एउटा numerical त छुदा पनि छोएन यार ।"
यसो घडी हेरेको ५ बज्न थालिसकेको थियो । जाडो महिना सुर्यले आफ्नो duty छिट्टै सकिएको संकेत दीइरहेको थियो । छायाहरुको लम्बाइ बढ्दै थियो समानुपातिक रुपमा समय संगै । अगाडिका साथीहरु गन्थन गर्न थालेका थिए खै के बिषयमा हो । कुरो बुझ्दै जादा थाहा भयो हामीले त गन्तब्य नै बदली सकेका रहेछौ । बीच बाटोमै केटाहरुले लामो पर्खाल भयेतिर जान नभ्याउने अड्कल काटेछन । त्यता जाँदा साझ पर्ने र होस्ट्ल बस्ने केटी साथिलाई अप्ठ्यारो हुने , आदि कारणले अगाडी हिडेका साथिहरुले त्यस्तो निर्णय लिएछन । अरु कसैलाई पत्तै भएनछ । "कत्रो होला त नेपालको लामो पर्खाल ",,"कसका पालामा बनेथ्यो होला ?",,,आदी इत्यादी प्रश्नहरु अनुत्तरित भइरहे examको खाली पेपर जस्तै । साथिहरुको उत्सुकता त्यसै सेलाउदै गयो । केटाहरु कनकनाउदै थिए ।-"ओहो ! धन्नै great wall of china जत्तिकै रहेछनी । बरु चन्द्रमाबाट पो देखिन्छ की देखिदैन । '" हिड्ने जागर पनि मरिसकेको थियो । राष्ट्रिय निकुन्जको घना जंगल पातलिदै जादा एउटा सानो गाउँ देखिए जस्तो लाग्यो । १२ जनाको टोली एउटा भाचिएको रुखको आडमा एकैछिन बिश्राम् लियौ । कोहि कोहि भने सविनलाई ठट्टौरी पारामा अझै भनिरहेका थिए । -"सबिनको सामान्य ज्ञानको पर्खाल त अद्रिष्य नै रहेछ ।"
( यो लेख January 30, 2011 मा फेसबूकमा पोस्ट गरेको थिए )
Posted by Trilochan Bhattarai at 12:04 AM 1 comment:
ट्विटरमा कहिलेकाही गम्भिर बिषयमा पनि रमाइलो तरिकाले बहश हुने गर्दछ । कती कुरा मात्र रमाइलो गर्नका लागि लेखिन्छ भने कती कुरा साच्चिकै चित्त नबुझेर लेखिन्छ । आज एक्कासी ट्विटरमा "कहिलेसम्म देश बन्दैन " भन्ने बिषयमा बहश सुरु भयो । खै कहाबाट सुरु भयो यो त मैले पत्ता लगाउन सकिन तर पनि देश नबन्नुका कारणहरुबारे बिभिन्न धारणाहरु टाइमलाइनमा पोखिए । हुन त यहाँ लेखिएका कती कुराहरु हल्का भावनाहरु मात्र लाग्न सक्छन तर पनि केही बिचारहरु भने साच्चिकै मनन गर्न योग्य छन । गम्भिर कुराहरुलाई रमाइलो रुपमा प्रस्तुत गरिने ट्विटरमा देश प्रगतिको बाटोमा लम्कन नसक्नुका कारणहरु के के लेखिएको रहेछ त पढौ हामी पनि
Ananta Koirala ‏@AnantaBrt
जबसम्म पाँचतारे होटलहरूमा सेमिनार र मिटिङ सकिँदैन तबसम्म यो #देश बन्दैन। सबैलाई थाहा छ देश सेमिनार र मिटिङले बिग्रेको हो :(
जब सम्म जनता सचेत हुँदैनन र पैसा, रागो र रक्सी कै ह्याङ मा भोट् हाल्न छाड्दैनन् तब सम्म देश बन्दैन ।
Bigyan Neupane ‏@bigyan_science
जब सम्म १ रुपैयाको काम गरेर १०० रुपैयाको कुरो गर्न छोड्दैनन् मानिस तब सम्म बन्दैन देश।:)
Dipesh कोइराला ‏@addkali
जब सम्म देश प्रेम नेपालीलाई हल्ला लाग्छ तब सम्म यो #देश बन्दैन :p
जब सम्म मान्छेहरु काम को बेलाँ अपिसाँ बसेर टुइटर र फेसबुक चलाउछन तब सम्म यो देश बन्दैन :D
Govinda Shrestha ‏@goshrestha
जब सम्म भ्रष्टचारिहरू जेल पर्छन तब सम्म #देश बन्दैन, यिनलाई फैसला हुने बित्तिकै अदालत भित्रै मृत्युदण्डको ब्यबस्था हुनु पर्छ !!!On The Spot
Ananta Koirala ‏@AnantaBrtजबसम्म घाटबाट मुर्दा उठेर सडकमा दौडिदैन तबसम्म यो देश बन्दैन। देशमा मुर्दाहरूको जो राज छ, ज्यूँदाहरू कहिल्यै जन्मेनन् राजनीतीमा :( #Nepal
Frenzdiary Patriotic ‏@Frenzdiary
जसले जे भने पनि देश आफु नबन्दा(ज्ञानी,मेहनती ,अनुशाशित र सफल)सम्मबन्दैन|नेता,बिदेशी र राजनीति एकदम सहायक तर ठूला प्राविधिक हल्ला मात्र हून|
Balkrishna Ghimire ‏@ghimireab
जब सम्म गाउ गाउका मान्छेले ट्विटर चलाउदैनन तबसम्म #देश बन्दैन :)
जबसम्म बालकलाई स्तनपान गराउन छाडि डिस्को जान छोड्दिनौ तब सम्म यो #देश बन्दैन
slow mind ‏@Chalise86
जती #TL म कोहोलो गरेपनी म नफर्की देश बन्दैना के तेसैले सबै मिलेर मलाई #PMबनाउने बातावरण तयार पर्नुपर्यो :D
Raji Bajracharya ‏@rbazra
#जबसम्म आम नेपालीको टुलुटुलु हेरेर बस्ने र जे गरे पनि सहेर मात्रै बस्ने बानीहट्दैन... तबसम्म #देश बन्दैन ।
Anjan Panthee ‏@wanzanpanthee
जबसम्म मान्छेले हाइवे भन्ने फिल्म बुझ्देनन तबसम्म देश बन्दैन लौ जा....!!!!
Trilochan Bhattarai ‏@Trilochan347
"ओ हो कती फोहोर यो बागमती" भन्दै खोलातिर प्याच्च थुक्ने बानी नछाडे सम्म देश बन्ने वाला छैन
बाबुरामलाई फिटिक्क काम गर्न नदे'र मात्र हो, नत्र दुई-चाटा देश ता बाउरामले बनाइदिन्थे, के को ल्याङ ल्याङ !! :))
Suraj Kumar Aryal ‏@Chhucho_Keto
भ्रम नै सहि कसैलाई गालि गर्दैमा र देश देश भनेर चिच्याउँदैमा देश बन्छ भनेर बिश्वास गर्दिन, सबैले आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गर्नैपर्छ देश बनाउन
Nirajan Sinkhada ‏@NiranDai
चोर नेता जति सबैलाई यमलोक नपठाई बन्दैन यो देश
यो देशका कर्मचारी जब सम्म आफ्नो पेसा प्रती इमान्दार हुँदैनन तब सम्म देश बन्दैन। काम मा ध्यान छैन खाली twitter त । :P
Lenin Banjade ‏@lendaai
रोममा आगो लागिरहँदा निरोले मुरली बजाएजस्तै हो मित्र हामी ! गफ गरेर देश बन्ने भए गच्छदार, बाबुरामहरू रातदिन लागिपरेर यति मेहनत गर्थेनन् !
सुकुम्बासी Pasha ‏@KTMtwt
जबसम्म भासन डिन सक्षम टर रासन दिन बौको ब्बया देख्ने बर्ग देश र ट्वीटरमा राज गर्छन्, टबसम्म देस् बन्डैन।
Posted by Trilochan Bhattarai at 1:59 AM 1 comment: